घरबेटी दीदीलाई चिकेको Nepali Youn Katha - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » घरबेटी दीदीलाई चिकेको Nepali Youn Katha
घरबेटी दीदीलाई चिकेको Nepali Youn Katha
एकदिन बिहानै मर्निङ वाक गर्न जाँदा सोयम्भूको उकालोमा देखे । एकदम पसीना चुहाउँदै उक्ली राख्नु भएको रहेछ । अनि मैले दीदी हजुरको घर पकनाजोल हैन भनेर सोधेँ । मुसुमुसु हाँसेर हो भन्नुभयो अनि सोध्नु भयो – “कसरी थाहा पाउनुभयो भाई म पकनाजोल को हो भनेर ?” मैले भनेँ – “गएको शनिबार हजुरलाई नुहाइरहेको देखेको थिएँ छतमा ।” उनी एक छिन त बोल्नै सकिन । अनि बोलाउनु पर्दैन त भाई भन्नुभयो । अनि मैले पनि तेहि भएर अहिले बोलाएको नी दिदी भने । दुबै जना गफ गर्दै सोयम्भमा पुग्यौ र सँगसँगै पकनाजोलसम्म गफ गर्दै घरसम्म आयौँ । दिदीले सबै कुरा बाटोमानै गर्नुभएको थियो बूढा र छोरो अमेरिका गएको रहेछ । दिदी तीन बर्षदेखि एक्लै बस्नुहुँदो रै’छ । चिया खान जाउ भनेर जिद्दी गरेपछि म पनि दिदीको घरमा नै गएँ । एकदम डेकोरेशन मिलाइएको घर अनि सजावट देखेर म पनि अचम्म परेँ । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई टीभी हेर्दै गर्नु म चिया पकाएर ल्याउछु भनी किचनमा गई ।
मर्निङ वाकमा गएको ड्रेसमा झन सेक्सी देखिन्थी । मेरो सानो भाई यानिकि लाडो एकदम उठिरहेको थियो । दिदीले चिया लिएर आई । चिया दिँदा दिदीको दुधको पोको अाधाभन्दा बढ़ीनै प्रस्ट देखिन्थ्यो । दिदीले ‘भाई आजको खाना मै थिम खानुपर्छ नि’ भनेर ड्रेस चेन्ज गर्न कोठामा गई । कोठामा चुकल पनि नलगाई लुगा चेन्ज गर्न थाली । एतिकैमा बत्ती गयो । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई म लुगा चेन्ज गर्दैछु अली अध्यारो भयो इन्वर्टर अन गर्देउन । मलाई थाहा थिएन इन्वर्टर कहाँ छ भनेर अनि मैले सोधे इन्वर्टर कहा छ दिदी ? दिदीले भन्नुभयो मेरो ड्रेस चेन्ज गर्ने रूममा नै । म त एकदम डर लागेको जस्तो भयो अनि ढोका खोलेँ । ओह माई गड ! मैले दिदीलाई त पेंटी र ब्रा मा पो देखेँ । इन्वर्टर अन गरेपछि मेरो लाडो सनक्क भएर आयो ।दिदी एकनजरले हेरिराख्नु भएको रहेछ, म पनि आर्मी मान्छे के कम भनेर सोझै दूध माड़ेँ । खासै केहि प्रतिक्रिया नजनाएपछि किस गरेँ अनि दिदीको पुती छामेको त पूरा पानी बगिराखेको रै’छ । अनि बेडमा लागेर लडाएँ । उनी ओह ओहो गर्दै थिई मेरो लाडो अति ठन्केको हुनाले मजाले छिराएँ । ऐया… ऐया भन्दै थिई मेरो पालो करीब आधा घन्टा चिकेपछि फूसि नाईटो भरी झारिदिएँ । दीदीले फेरी लाडो चुस्नुभयो । मेरो फेरी लाडो फेरि ठन्केकोले कुकुर स्टाइलले चिके । निकै आनन्द आयो । म करीब एक घन्टा जति बसेर खाना खाएपछि रूममा गएर दिनभरि सुतीरहेँ । बेलुका करीब नौ बजेको थियो दिदिले भाई आज खाना खान यतै आउनु है भनि ।
gharbeti didi chikeko, gharbeti didi lai chhikeko, gharbeti didi lai chikeko, nepali chikeko katha, nepali chikeko story, nepali youn katha, घरबेटी दीदीलाई चिकेको
मामा के लड़के के साथ चूत चुदाई
mere boobs dekhna chahoge